Trump iyo madixii hore ee CIA-da John Brennan oo is af dhaafay - BBC News Somali
17 Agoosto 2018
Madixii hore ee CIA-da John Brennan ayaa jawaab kulul siiyay madaxweyne Trump ka dib markii uu amar ku bixiyay in lagala noqdo kalsoonida dhinaca galaangalka ammaanka, isagoo u sababeynaya codsigiisa macluumaadka ee ku saabsan Ruushka.
Qoraal uu Khamiistii siiyay wargeys ayuu Mr Brennan ku qoray in ololihii Mr Trump uu kaashanayay xukuumadda Moscow si uu ugu guuleysto doorashadii 2016-kii.
In lagala noqdo kalsoonida dhinaca galaangalka amniga waxa ay sababeysaa in uu soo fuulo culeys ah in uusan galaan gal u yeelan karin macluumaadka xasaasiga ah ee dowladda.
Aqalka Cad ayaa sheegay in tallaabadaas ay qaadeen maadaama Mr Brennan ay "Hadalladiisa yihiin kuwo aan lahayn meel loo raaco" isla markaana loo jeediyay "eedeymo caro xoog leh abuuraya".
Hase ahaatee Mr Trump ayaa wareysi uu siiyay wargeyska Wall Street Journal waxa uu ku sheegay in arrintaan uu sabab u yahay codsiga ay waaxda caddaaladda ku dooneyso macluumaadka ku saabsan eedeymaha la xiriira in Ruushka uu fara gelin ku sameeyay doorashadii Mareykanka ka dhacday sannadkii 2016-kii.
"Waa wax aan suurta gal ahayn," ayuu Mr Trump ku yiri wareysiga uu siiyay Wall Street Journal isagoo markaas ka hadlayay baaritaannada socda.
In kalsoonida lagala noqdo Mr Brennan "waa lagu khasbanaa" ayuu yiri madaxweynaha Mareykanka.
Mr Trump ayaa sheegay in Mr Brennan iyo "dadkaan" ka tirsan waaxda sir doonka Mareykanka ay hor seedeen su'aalaha la iska weydiinayo fara gelinta Ruuhska.
Mr Brennan waxa uu ahaa agaasimaha hay'adda sir doonka Mareykanka ee CIA-da markii ay soo baxayeen eedeymahaas fara gelinta ah waxaana uu xilka iska casilay markii uu Mr Trump ku guuleystay doorashada.
Sarkaal hore oo CIA ah oo lagu xirey Maraykanka
Sannadkii la soo dhaafay Mr Brennan ayaa sheegay in codsiga ku saabsan macluumaadka Ruushka uu ahaa mid "si fiican loogu baahnaa" sababtoo ah Ruushku waxa ay si "toos ah u soo fara gashadeen" cod bixinta.
Madaxweyne Trump ayaa marar badan beeniyay arrimahaas waxaana uu baaritaanka ku tilmaamay "weerar lagu soo qaaday bulshada"
Muxuu ku sheegayay qoraalka uu soo saaray Mr Trump?
Image caption John Brennan agaasimihii hore ee CIA-da
Warbixinta qoraalka ah ee ka soo baxday xafiiska Mr Trump waxa ay ku muddeysneyd 26-kii bishii July - oo ahayd saddex maalmood ka dib markii ugu horreysay ee uu Aqalka Cad soo gudbiyay fikradda kalsooni kala noqoshada.
Waxa uu ku sheegay in "beenta uu sheegay" Mr Brennan ay sababtay hadallo ku-tiri-ku-teen ah oo la isla dhex marayo… ayna ugu dambeyn sababi karaan kala qeybsanaan iyo qalalaase".
Qoraalka madaxweynaha ayaa waxaa ku qeexnaa in Mr Trump uu sidoo kale ka fiirsanayo in kalsoonida ku saabsan helitaanka macluumaadka lagala noqdo sagaal sarkaal oo kale oo waliba hayay xilal sar sare, kuwaasoo dhammaantood horay u cambaareeyay madaxweynaha.
Dadka laga fiirsanayo in lagala noqdo kalsoonida galaangalka ammaanka
James Comey, agaasimihii hore ee FBI-da
Sally Yates, ku xigeenkii hore ee xeer ilaaliyaha guud
James Clapper, agaasimihii hore ee sirdoonka qaranka
Michael Hayden, agaasimihii hore ee hay'adda amniga qaranka
Susan Rice, la taliyihii hore ee amniga qaranka
Andrew McCabe, ku xigeenkii hore ee agaasimaha FBI-da
Peter Strzok, dambi baarihii hore ee FBI-da
Lisa Page, qareenkii hore ee FBI-da
Bruce Ohr, ku xigeenkii hore ee dhanka isku xirka ee xeer ilaaliyaha guud
Xildhibaannada xisbiga Dimuqraadiga waxa ay arrintaas u cambaareeyeen si xoog leh oo cod dheer ah.
Senator Mark Warner oo aqalka odayaasha u matala gobolka Virginia ayaa ficilkaas ku tilmaamay mid dulmi ah.
Balse qaar ka mid ah sharci dajiyeyaasha xisbiga Jamhuuriga ayaa soo dhaweeyay tallaabadaas, waxaana ka mid ah Senator Rand Paul oo sheegay in uu horay Madaxweynaha ugu booriyay arrintaas.